पुल्चोकमा पि टिएका प्रहरी जवानले अस्पतालबाट दिए सबैलाई भावुक बनाउने संदेश: हेलमेट लगाएकाले धन्न बाँचे.. ! – Butwal Sandesh
पुल्चोकमा पि टिएका प्रहरी जवानले अस्पतालबाट दिए सबैलाई भावुक बनाउने संदेश: हेलमेट लगाएकाले धन्न बाँचे.. !
ट्राफिक प्रहरी प्रभाग मंगलबजारमा कार्यरत् प्रहरी जवान कमलप्रसाद घिमिरे बिहीबार नटोल डाइभर्सनमा थिए। यो ललितपुर महानगरपालिकाको पछाडिपट्टि हो। सवारी साधनहरूलाई ‘डाइभर्ट’ गर्दै ड्युटी गरिरहेका थिए। उनको साथमा प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण घलान पनि थिए।
राता मच्छिन्द्रनाथको रथ ल्याउनेहरूको भीडभाड बढिरहेको थियो। उनी सवारीसाधन पास गराएरै बसिरहे। तर, अचानक अगाडिबाट ठूलो भिड आयो। थेग्नै नसकिने खालको। त्यो भिडमा भाग्नुको विकल्प थिएन। असई घलानले एक दुई मु*क्का खाएर भागिसकेछन्। उनले त्यो देखेनन्। ‘ए भाग भाग भन्यो कसैले,’ जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालमा उपचाररत् घिमिरेले भने, ‘मोटरसाइकल स्टार्ट के गरेको थिएँ, ८(१० जना भएर ल*डाएर कु*ट्न थाले।’
उनी चढेको बा २ झ ७२४२ नम्बरको मोटरसाइकल त्यही पल्टियो। मोटरसाइकलको अवस्था के छ थाहा छैन। धन्न उनले टाउकोमा लगाएको हेल्मेट फुत्केन। ती ८(१० जना कसैले इँट्टाले हेल्मेटमाथि, कसैले जीउमा मु*क्का, ला*त्ती प्र*हार गरेका थिए। ‘हेल्मेट फुस्किएको भए म म*र्थेँ,’ उनले भने।
कसैले कु*टपिट गरहेका बीचबाट उनलाई जोगाउन पनि खोजे। त्यही जोगाउने समूहको मद्दतका कारण अ*प्रिय घ*टना हुन पाएन। ‘केही मिलेर मलाई अंगाल्दै भाग्न मद्दत गरे, म अन्य प्रहरीहरूको बीचमा पुग्नै लाग्दा ढ*लेँ।’
कोरोना म*हामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाका बेला रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा प्रभावित भएपछि आ*क्रोशित स्थानीय प्रहरीमाथि जाइलागेका थिए। यो घ*टना हुँदा अन्य सुरक्षाकर्मी कोही नभएकाले गर्दा घिमिरे भीडमा फसेका थिए। त्यो भीड सरकार र प्रहरीसँग आ*क्रोशित थियो। सधैं प्रहरीले भीडमा सर्वसाधारण कु*टपिट गरेको खबर आइरहँदा बिहीबार भने ठिक विपरीत भइरहेको थियो।
उनको जीउमा साधारण चो*टपटक छ। टाउको भने अत्यधिक दुखेको महशुस भएको उनले बताए। उनको टाउकोको सिटिस्क्यान रिपोर्ट सामान्य देखिएको छ। चिकित्सकले बिहीबार अस्पतालमै बस्न सुझाव दिएका छन्। आज शुक्रबार उनी डिस्चार्ज हुँदैछन्।
घिमिरेको घर सिन्धुली दुधौली नगरपालिका ४ हो। उनी गत मंसिरदेखि प्रभाग मंगलबजारमा छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले प्रहरीमाथि कु*टपिट गर्नेहरूको पहिचान गरिरहेको जनाएको छ। – सेतोपाटी